Mihintale ~ Journey-Assist - Ny tena mahaliana any Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Mihintale (Mihintale)
25 Desambra, 2019
Ny fijerin'ny kompleks Mihintale
Vidiny ao amin'ny kompleks Mihintale
Ahoana ny fomba mankany Mihintal
Mihintale complex on the map
Weather in Mihintal androany
Fampahalalana ho an'ny complexe
Ny fijerin'ny Mihintale
12 km miala Anuradhapura dia toerana manan-danja sy malaza amin'ny toerana misy azy - ny tandavan-tendrombohitra Mihintale, izay ametrahana rafi-boajan'ny Bodista taloha, fa raha tsy izany, ireo sisan-javatra rava, dia mifantoka ao.
Fa voalohany indrindra, Mihintale dia toerana masina - toerana nahaterahan'ny Buddhism Sinhala ao amin'ilay nosy. Eto dia nisy fotoana iray nisy fivoriana nitranga izay nitàna andraikitra tsy mbola nisy taloha tao amin'ny Buddhism any Sri Lanka.
Tantara fohy momba an'i Mihintale
Tamin'ny 247 talohan'i Kristy, ny King Devanampiya dia nihaona tamin'ny zanaky ny Emperora Indianina Mahinda, izay nitory ny Buddhisme. Nandritra ity fihaonana ity dia nampahafantatra an'i King Devanampia ny foto-pinoan'ny Buddhism i Mahinda ary nihanatanjaka azy tanteraka izy hatramin'izay nanomboka nandray anjara mavitrika tamin'ny fampandrosoana ny fivavahana tao amin'ny nosy. Zava-nisongadina lehibe teo amin'ny tantaran'ny firenena izany.
Hatramin'izay, Mihintale dia toeram-pialan-tsasatra ho an'ny Bodista manerana izao tontolo izao. Noho izany, tsy vinan'ny mpizaha tany mahaliana fotsiny izany, fa toerana ara-pinoana iray lehibe feno ny finoana efa hatramin'ny taonjato maro ihany koa.
Mihintale. Ny fitsipiky ny Buddhism any Sri Lanka
Fandraisana roa tao Mihintal
Marihina fa misy fidirana roa amin'i Mihintal. Ilay antsoina hoe: fiara vaventy ambony sy ambany:
Ambony ho an'ny fomba fohy sy mora kokoa. Matetika no nentina eto ireo fitsangatsanganana.
Ny fiantsenana ambany indrindra dia ny fitsidihana tsy miankina. Fa tokony ho fantatrao. fa avy ao amin'ny lalana mahasarika an'i Mihintale dia tohatra lava misy azy Dingana 1840. (hahatratra 305 metatra)
Ankoatra ny fiakarana mankany amin'ny lemaka mango dia afaka mandeha anelanelan'ny fiatrehana manokana ianao amin'ny fitaterana manokana (afa-tsy ireo izay mijanona amin'ny tohatra). Amin'ity tranga ity dia ny fisafoana ireo toerana mahaliana an'i Mihintale dia maharitra 2-3 ora.
Inona no ho hita ao Mihintal
Ny toerana tena ilaina:
Mango Plateau (Ambastala)
Stupa Ambastala (Dagoba Ambasthala)
Sarivongan'i Buddha ao Mihintal
Stupa Mahaseya (Dagoba Mahaseya)
Stupa Mahindu (Mihindu Seya)
Aradhana Gala Rock
Royal Hill (Kaludiya Pokuna)
Monasitera Medamaluwa (Medamaluwa Monastery)
Lion Pond (Sinha Pokuna)
Refectory (efitrano fandraisam-bahiny, Alms hall, Bath Ge, Dana Salawa)
Hall of Relics (The Relic House)
Stupa Kantaka Chetiya (Kantaka Chetiya)
Zavamaniry famandrihana monk
Hopitaly Veda Sala
Tendrombohitra Elephant (Anaikutti)
Mihintale plan map
Sarin-tsarintany Mikhentale amin'ny teny rosianina
Ankehitriny diniho izany rehetra izany:
Ity takelaka ity dia sehatra iray misy ireo mpijery malaza indrindra amin'i Mihintale:
1. Stupa Ambastala (Dagoba Ambasthala)
Dagoba Ambasthala. Stupa Ambastala
Araka ny angano, tany amin'ny toerana naorin'io stupa io, tamin'ny 247 talohan'i Kristy, dia nisy ny fivoriana ara-tantara nataon'ny Mpanjaka Devanampiya niaraka tamin'ny zanaky ny amperora indiana Mahinda, izay nitory ny Buddhisme. Vokatr'io fihaonana io dia tsy nifantoka tamin'ny hevitra momba ny Buddhisme i King Devanampy ary hatramin'izay dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fampivoarana an'io fivavahana io tany amin'ny nosy.
Eo anoloan'io stupa io dia ny sarivongan'i King Devanampius hita eo amin'ny sary.
2. sarivongan'i Buddha ao Mihintal
Io toe-javatra io dia naorina tamin'ny 1995 ary tsy mitondra kontra ara-tantara.
3. Stupa Mahaseya (Dagoba Mahaseya)
Dagoba Mahaseya. Stupa Mahaseia
Izy io no stupa lehibe indrindra ao Mikhental. Araka ny angano, ny volon-dohan'i Buddha dia miorina ao anatiny. Toerana fivahiniana masina ho an'ny Buddhista eran'izao tontolo izao izy io!
4. Stupa Mahindu (Mihindu Seya)
Mihindu Seya. Stupa Mahinda
Izy io dia stupa naorina tamin'ny taonjato fahatelo talohan'i Kristy, ary araka ny angano, ny sisa tavela amin'i Mahinda dia mitoera ao.
5. Rock Aradhana Gala (Aradhana Gala)
Aradhana Gala. Aradhana Rock
Ity dia vatolampy masina ao amin'ny tontolon'ny Buddhism. tao aminy araka ny lovantsofina, Mahinda vakio ny toriteny nataoko! Tena ilaina ny fivahiniana masina eo amin'ireo mpanaraka ny Buddhism.
Tsara homarihina. tena mampidi-doza ny miakatra amin'ity vatolampy ity, satria tongotra maro no voasokitra teo amin'ny vatolampy nandritra ny taonjato lasa sy ny mpivahiny an'arivony izay nandeha tamin'izy ireo dia nanjary nohazavaina ary nanjary tena nitsanga sy tsy azo itokisana.
Ny fiakarana amin'ny Vatolampy Aradhana
Fa aza misalasala fa raha mitsangana ianao, dia hahazo valisoa ianao avy any ambony miaraka amin'ny panorama mahafinaritra!
Fahatongavana any Mango
Fandraisana Mangalatra manga karama. Vidiny - 500 rupees.
Hasaina hangala ny kiraronao ianao alohan'ny hidiranao.
Misy antsoina hoe Havoana Royal (Kaludiya Pokuna).
Ity misy sisan-javatra amin'ny monasitera izay nisy teto taloha, izay ekena ho monasitera bodista voalohany ao amin'ny nosy. Manodidina ny sisa tavela amin'ny monasitera ianao dia afaka mahita endrika mivaingana, izay sela mpizara toy ny sela.
Kaludiya Pokuna. Renirano mainty ao Mikhintal
Manohitra ny havoana mpanjaka dia misy fitoeram-boary voajanahary iray, izay, araka ny angano iray, nivadika mainty tsy dia hoe nivavahan'ny moanina teo amoron-dranony nandritra ny 24 ora. Noho ny zotom-po toy izany, dia nanjary mainty ny rano tao anaty dobo.
Mazava ho azy fa ny rano ao anaty dobo dia tsy mainty, fa rehefa milentika ny masoandro, dia mbola misy “haizina” tsy mahazatra.
Manodidina ny dobo dia afaka mahita ny sisa tavela amin'ny tranobe fahiny.
Ny habakabaka ao anaty dobo dia asongadin'ny fiadanam-pahalemana sy mangina ary mihoatra noho ny fandraisana anjara amin'ny fahazoana meditative mood.
Ny monasitera dia eo amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny fanombohan'ny fivezivezena ao amin'i Mikhintal. Ny tapakila fidirana dia amidy eto ihany.
Ny monasitera Medamaluv amin'ny fanjakany ankehitriny dia misy:
1. Lion Pond (Sinha Pokuna)
Sinha Pokuna. Lobon-drano leona
Tankina vato kely iray, eo am-potony ahafahanao manavaka ny sarivongan'ny liona mijoro eo amin'ny tongony hind. Noho izany dia avy ny anarana.
Raha manakaiky ianao dia afaka mahita frieze vato mahaliana mampiseho mpandihy, mpitendry mozika ary liona.
2. Ny Fanafody (efitrano fandraisam-bahiny, Alms hall, Bath Ge, Dana Salawa)
Refectory. Izy no Hall of Alms
3. Ny Lapan'ny Fialohazana (Ny Relic House)
Relic House. Efitrano fialamboly ao Mihintal
Takela-bato roa no manamarika fa ny sata sasany dia tsy mety maty, misy fitsipika mifehy, fampahalalana momba ny adidin'ny moanina sy mpanompo izay mipetraka eto.
4. Efitrano Fivoriambe
Ny efitrano fivorian'ireo moanina. Ny haavon'ny zana-kavoana afovoany dia natao ho an'ny moanina zokiolona. Ny tsanganana niongana nanelanelana dia nanohana ny tafon'ity efitrano ity. Ankehitriny dia vitsy sisa amin'izy ireo.
Stupa Kantaka Chetya, iray amin'ny tranobe voalohany ao Mihintal.
Kantaka Chetiya. Stupa Kantaka Chetya.
Ny fananana diam-bolo eo amin'ny 40 metatra sy ny haavon'ny 12 metatra dia endri-javatra mahavariana! Na dia eo aza ny hoe: stupa manana endrika boribory endrika amin'ny stupas izy, dia misy rindrina efatra mahitsizoro mipetraka eo amin'ny teboka kardinaly. Ireo rindrina ireo dia voaravaka afisy maro amin'ny antsipirihany mamaritra ny zavamaniry, liona, elefanta, olona kely.
Lavitra lavitra ny stupa of Kantak Chetya ianao dia mahita lava-bato 68, izay fotoana iray no nisaintsaina sy vavaky ny moanina nipetraka teto.
Mbola misy sisa ny hopitaly mandraka androany, ny faran'ny efitrano vitsivitsy fotsiny, izay nisy ny birao, ny fivarotam-panafody, ny efitrano fidiovana ary ny sipa mihitsy aza.
El Vehera Hill na tendrombohitra Elephant (Eth Vehera, Anaikutti)
Ny Tendrombohitra Elephant no havoana avo indrindra amin'i Mihintale. Eo an-tampon'ity tendrombohitra ity dia ahitanao ny sisa tavela amin'ny monasiteran'i Et Vehera (nadika hoe stupa amin'ny elefanta iray). Ny fiakarana ity havoana ity dia tsy mora, fa toy ny valisoa dia ho hitanao ny fomba mahafinaritra amin'ny manodidina avy any ambony.
Vidina ny fidirana amin'ny lemaka - 500 rupees.
Vidiny ao Mihintal. fijanonana
Fidirana maimaimpoana mankany Mihintale
Mandoa vola fotsiny Mongo Plateau - 500 rupees
Ny tapakila amidy eny amin'ny arabe avy amin'ny kamiao. Alohan'ny hidiranao ny lembalemba, dia tokony esorina ny kiraronao, ary avelao any amin'ny birao havia
Misy fidirana roa amin'i Mihintal. Ny antsoina hoe izany fiara vaventy ambony sy ambany.
Ambony ho an'ny fomba fohy sy mora kokoa. Matetika izy ireo no mitondra fitsangatsanganana.
Ny fitsangatsanganana ambany indrindra dia ny fitsidihana tsy miankina. Fa tokony ho fantatrao. fa avy ao aminy mankany amin'ny toerana mahasarika an'i Mihintale dia tohatra lava izay misy 1840 dingana.
Mihintale no misy 12 km miala Anuradhapura, eo ampitan'ny Trinomalia. Ny fomba akaiky indrindra eto dia avy amin'ny Anuradhapura. Ao amin'ny Anuradhapur koa dia mora ny mahita hotely, ary io no toerana akaiky indrindra an'i Mihintal, satria iray ihany ny trano fandraisam-bahiny kely iray.
Ny bus avy any Mihintal dia mihazakazaka tsy tapaka amin'ny gara bus Anuradhapura mandritra ny andro:
20 minitra ny faharetan'ny dia.
30 rupee ny vidiny.
Rehefa faran'ny herinandro, avy amin'ny gara ao Anuradhapura dia afaka mandeha amin'ny lamasinina maraina ao Mihintal ianao:
Faharetan'ny dia - 30 minitra.
Fare - 15 rupees
Mitentina 1400 XNUMX rupees ny taksiborosy manomboka any Anuradhapura mankany Mihintal.
Tuk Tuk dia mitondra anao amin'ny rupe 1000 miaraka amin'ilay làlana mitovy.
Avy any an-tanànan'ny sasany any Sri Lanka, i Mihintal dia tsy afaka mankany amin'ny alàlan'ny Anuradhapura ihany.
telefaonina: + 94 71 830 8264
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/NFeHub21svnpTz4V8
Mihintale amin'ny sari-tany
Hevitra momba an'i Mihintal
Hevitra momba an'i Mihintal (valin'ny Google)
Hevitra momba ny Mihintal (Tripadvisor)
Toerana mahavariana! Mila fotoana iray farafahakeliny mandritra ny andro iray mba hahitanao sy hahatsapany izay rehetra azony omena!
Manoro hevitra aho ny handeha amin'ny maraina, mba ho vitsy ny olona, ​​ary manana fotoana bebe kokoa, ary mba tsy ao amin'ny hafanana hihanika ny tohatra.
akaikin 'Anuradhapura. angamba tsy hanasa ny toerana roa, raha afaka andro iray. ary tena mahaliana ny toerana
Marina izany, Polly. Ho an'ny tsara, mila andro aman'alina eo ianao ary mba tsy hihazakazaka.